भाग्यमानी बुलफाइटर !
काठमाडौं – पेरुका बुलफाइटर आन्द्रेस रोका रे मात्र १९ वर्षका भए । तर, बुल फाइटिङको क्षेत्रमा उनी चर्चित नाम हुन् । ठूला साँढेसँग जुध्नुपर्ने यो खेल विश्वकै खतरनाकमध्ये मानिन्छ । धेरैले यो खेलका दौरान ज्यान पनि गुमाएका छन् । तर, रे भने कुनै परवाहबिना मैदानमा उत्रन्छन् । उनी आफै पनि घाइते नभएका होइनन् । तर, […]
साथीलाई बचाउन सिंहसँग एक्लै भिड्यो अर्ना (फोटोफिचर)
दक्षिण अफ्रिकामा एउटा बहादुर अर्नाले आफ्नो साथीलाई जोगाउन जंगलको राजा मानिएको सि..
‘कुमारी’ भन्दै ४० वर्षीया नायिकाले राखिन् श्रीमान्का लागि विज्ञापन
थाइल्याण्डमा बैँककमा एक ४० वर्षकी अभिनेत्री अचम्मको तरिकाले श्रीमान् खोजिरहेकी छ..
पाकिस्तानमा यो कस्तो न्याय ? : सामूहिक बलात्कारका अपराधि गहुँ दिएर छुटे
सिंध – पाकिस्तानमा सामूहिक बलात्कारको मामिलामा स्थानीय आगुवाहरुको समूहले १२ सय क..
नयाँ दिल्ली – भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भर्खरै धीरुभाई अम्बानी, श्री श्र..
संसारको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर, जसलाई भयंकर तूफानले पनि असर गरेन (फोटोफिचर)
एजेन्सी/होलीको अवसरमा वृन्दावनमा टिभी सिरियल महाभारतका चार स्टार कलाकार स्पेशल सत्संग उत्सवमा भाग लिन आए । यो उत्सव यहाँ बनिरहेको चन्द्रोदय मन्दिरको निमार्णाधिन साइटमा आयोजना गरिएको थियो । यसै क्रममा प्रोजेक्ट डाइरेक्टर सुबयुक्ता नरसिंहले यो मन्दिरलाई हुदहुद जस्तो भयंकर तूफानले पनि असर नगर्ने बताए । २०१४ मा १ सय ७० किलोमिटर प्रत..
किन महिलाको सर्टको बटन देब्रेपट्टी हुन्छ
एजेन्सी/पूरुषको सर्टको बटन दाइनेपट्टी हुन्छ तर महिलाको देब्रेपट्टी । खासमा किन यस्तो हुन्छ भनेर कहिल्यै अनुमान लगाउनुभएको छ । यसका पछाडी मानिसको दिनचर्या जोडिएको छ वा शारिरीक वनावट वा ऐतिहासिक कारण यो जान्नका लागि तलका मननयोग्य तर्क पढ्नुहोस । पहिलो तर्क भनिन्छ , पहिला पहिलो पूरुषहरु आफैँ कपा लगाउथेँ । तर महिलाले आफै कपडा लगाउँद..
रोचक : जहाँ भगवानको साटो हुन्छ ‘बुलेट बाइक’ को पूजा
जयपुर – भारतको राजस्थानस्थित पाली क्षेत्रमा एउटा यस्तो मन्दिर रहेको छ जहाँ भगवानको साटो बुलेट बाइकको पूजा हुन्छ । लड्डुको साटो रक्सी चढाइन्छ । मानिसहरुको विश्वास छ कि सो मन्दिरमा पूजा गरेपछि दुर्घटना हुँदैन र त्यहाँको बाबाले उनीहरुको रक्षा गर्नेछन् । यस्तो किम्बदन्ती राजस्थानको पाली क्षेत्रमा ओम सिंह राठौड नाम गरेका व्यक्ति बस्थ..
सान डिएगो — आना अलाब्रुडाले सन् २००८ मा नै सान डिएगोको थोमस जेफ्रेसन स्कूल अफ लबाट स्नातक पास गरिन् । कक्षाबाट शीर्ष श्रेणीमा परिक्षा पास गरेपनि हालसम्म उनले वकिलको कुनै जागिर पाउन सकेकी छैनन् । धेरै प्रयासपछि पनि जागिर नपाएको झोँकमा ३७ वर्षीया आनाले कलेजविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेकी छिन् । कलेजले त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरुले [&h..
रोचकः प्रदूषणको चपेटामा परेको चीनमा सूरु भयो हावाको व्यापार
काठमाडौं । चीनको चर्चित हाइकिङ गन्तव्यमा अहिले हावाको पोकाहरु बिक्रीमा राखिएको छ । प्लास्टिकमा हावा भरेर मानिसहरुलाई बेचिन्छ । मानिसहरु पनि यसरी हावा किन्न पाउँदा दंग छन् । कसैले प्लास्टिकमा भरिएको हावा बोकेर घर लैजान्छन् भने कसैले तत्कालै प्लास्टिक फोरेर सास लिन्छन् । प्लास्टिकमा ताजा हावा भरिएका कारण मानिसहरु आर्कषित भएका हुन्..
यसरी माकुराको आहारा बन्यो खतरनाक खैरो सर्प
जनवारको संसारमा सर्पलाई निकै खतरनाक मानिन्छ । यसले धेरै स–साना जीवलाई आफ्नो आहरा बनाउने गर्दछ । तर, अरुको शिकार गर्ने सर्प यसपटक आफै सिकार बनेको छ । त्यो पनि एउटा सानो माकुराको । भोकाएको एउटा रेडब्याक माकुराले आफ्नो जालोमा सर्पलाई पारेको हो । खतरनाक अस्टे«लियन ब्राउन स्नेकलाई माकूराले जालोमा पारेर आफ्नो शिकार बनाएको छ । [&helli..
रोचक : कट्टु र मोजा चोर्ने बिरालो
मानिसको अन्डरवेयरलाई असाध्यै मन पराउने एउटा बिरालोले पछिल्ला दुई महिनामा ६० भन्दा बढी कट्टु र मोजा र प्यान्ट चोरेको छ । न्यूजिल्याण्डको ब्रिगिट नाम गरेको यो बिरालो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चोरीकै कारण चर्चामा छन् । हेमिल्टन इस्टका सराह नाथा जसले यो बिरालो पालेका छन् । उनका अनुसार यसले ११ वटा प्यान्ट र ५० वटा मोजा […]
एकैपटक मारिन्छन् हजारौँ विषालु सर्प, कसरी सम्भव छ यस्तो (फोटोसहित)
अमेरिकाको टेक्सास प्रान्तको शहर स्वीटवाटर यस्तो ठाउँ हो, जहाँ हरेक वर्ष वल्र्ड लार्जेस्ट रैटलस्नेक राउन्डअपको आयोजना हुन्छ । ४ दिनसम्म चल्ने यस इभेन्टमा सामुहिक रुपमा हजारौँ सर्पलाई मारिन्छ । जनावर अधिकारको संरक्षणमा लागेकाहरुले यस्तो काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर ५९ वर्षदेखि चलेको यो इभेन्ट बन्द भएको छैन् । पहिलो पटक सन् ..
‘शक्तिमान’को खुट्टा भाँच्नेमाथि केवल ५० भारु जरिवाना या ५ वर्षको जेल ?
उत्तराखण्ड पुलिसको घोडा ‘शक्तिमान’ को खुट्टा भाँचेको आरोप बीजेपीका सांसद गणेश जोशीमाथि लागेको छ । उनी शुक्रबार पक्राउ परे । उनको दाबी छ कि लट्ठीले हानेकै भरमा घोडाको खुट्टा भाँचिएको होइन । यता, जनावरको संरक्षणमा लागेका अधिकारकर्मीहरुले घोडालाई घाइते बनाउने व्यक्ति नै दोषी रहेको बताएका छन् । दोषी प्रमाणित भएको खण्डमा पनि सांसद् ज..
लाखौं पर्ने सेल्फी क्यामेरामा चिनियाँ युवतीको क्रेज
क्यासियोको पछिल्लो उत्पादन इक्जीलिभ एक्स–टीआर७० को बजार मूल्य १३९९ अमेरिकी डलर रहेको छ । यो मूल्य कम्प्याट क्यामेराका तुलनामा महंगो हो । तर, यस क्यामेरामा सेल्फी खिच्नका लागि विविध फिचरहरु छन् । यो क्यामेरा सेल्फी खिचेर त्यसलाई अनलाईनमा हाल्ने बानी परेका चिनियाँ महिलाहरुका लागि लक्षित गरेर बनाइएको हो । यस क्यामेराले क्यासियो कम्..
डक्युमेन्ट्री खिच्दा खिच्दै भेटियो विश्वकै सबैभन्दा लामो सर्प
काठमाडौं – बिबिसीको एक डक्युमेन्ट्री खिच्ने दौरान विश्वकै सबैभन्दा लामो सर्प भेटिएको छ । गोर्डोन बुचानानले एमेजोनको जंगलमा खिचेको ‘ट्राइब, प्रेडेटर एण्ड मी’ नामक डक्युमेन्ट्रीको दौरान १७ फिट लामो सर्प भेटेका हुन् । उक्त डक्युमेन्ट्री आइबार प्रशारण हुँदैछ । यसको पहिलो एपिसोडमा गोर्डन इक्वेडरको जंगलमा पुग्छन् । त्यहाँ उनले विश्वकै..
यि हुन् सम्बन्ध विच्छेद हुने ९ कारणहरु
एक तथ्याङक अनुसार विश्वमा ४२ प्रतिशत विवारहत सम्बन्धहरु विच्छेद हुन्छन् । ३४ प्रतिशत विवाहित जोडी त विवाहको २० वष नपुग्दै विच्छेद हुन्छन् । किन हुन्छन् त सम्बन्ध विच्छेद ? विश्वमै चर्चित सम्बन्ध परामर्शदाता एवम् सेक्स थेरापिस्ट पिटर सादिगंटनका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद हुने ९ कारणहरु यी हुन् । १. पर–सम्बन्ध यदि कोहि व्यक्ति विवाहित..
८३ वर्षका एन्टोनियो बेर्टोलियोनीको जीवन–कहानी दन्त्य कथाका पात्रको भन्दा फरक छैन् । उनी कुनै समय माछा मार्ने काम गर्दथे । अहिले टाभोलाराको एउटै मात्र रेस्टुरेण्ट चलाउँछन् । रोचक कुरा, चप्पल र सर्ट लगाएकै भरमा उलने पछिल्ला २२ वर्ष टाभोलारामा शासन गरेका छन् । उनी कुनै समाजवादी राजनीतिज्ञ होइनन, ५ स्क्वायर किलोमिटरमा फैलिएको यस राज..
लण्डन – इङल्याण्डको कोर्नवाल काउन्टीका भिख माग्दै हिँड्ने एक भिखारीले महंगो कार चढ्ने गरेको सार्वजनिक भएपछि स्थानीयहरु रुष्ट देखिएका छन् । भिख मागेर गुजारा चलाउने माथियु ब्रिटोनले अडि टिटी कार किनेपछि स्थानियहरु उनीसँग रुष्ट देखिएका हुन् । ब्रिटोन यस क्षेत्रमा चिनिएका मगन्ते हुन् । उनले वषौदेखि यस क्षेत्रमा माग्दै आएका थिए । तर ..
अमेरिका–अमेरिकाका स्कट केली र रुसका मिखाइल कोनीइन्को अन्तरिक्षमा १ वर्ष बिताएर पृथ्वी फर्किएका छन् । अन्तरिक्षमा ३ सय ४० दिन बिताउनु भनेको पृथ्वीमा दुई वर्ष बिताउनु सरह हो । शरिरमा लामो दूरीका स्पेसफ्लाईटको असरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने क्रममा उनीहरुले यति लामो समय अन्तरिक्षमा बिताएका हुन् । दुई वैज्ञानिकहरुलाई बोकेर सर्जी भोल्को..
कुकुरजस्तै देखिने संसारकै कुरुप बाघ
(एजेन्सी) अमेरिकाको लस भेगासमा रहेको चिढियाघरमा अहिले एउटा अचम्मको बाघ आर्कषणको केन्द्रमा छ । यो बाघ शान्दार वा सुन्दर होइन बरु कुकुरजस्तै देखिएर सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको हो । यस बाघलाई नियाल्नेहरु यसलाई संसारकै कूरुप बाघ बताउँछन् । यसअघि अमेरिकाको एक संगठनले सन् २०१११ मा यस्तो दुर्लभ बाघको ब्रिडिङमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ..
जब जड्याहासँग जंगली हात्ती डराएर भाग्यो (भिडियो)
काठमाडौं– एक अजंगको हात्ती मानव बस्तीमा पस्यो । अजंगको हात्ती मानवबस्तीमा पसेपछि सबै मानिसले डराएर हात्ती धपाउने हिम्मत गर्न सकेनन् । जब एक जड्याहाले हात्तीलाई देखे । धपाउन भन्दै चिच्याउँदै हात्ती भएतिर लागे । उनी हात्ती नजिक पुग्नै लाग्दा हात्ती त्यहाँबाट डराएर भाग्यो । घटना केहि दिन पहिलेको मात्रै हो भारतको देहरादुनको । यसरी ..
महिला बडी बिल्डर जसले पुरुषलाई समेत दिन्छिन् मात
सोल – दक्षिण कोरियाकी एक महिला बडी बिल्डर इन्टरनेटमा निकै चर्चामा रहेकी छिन् । उनी सुगठित शरीरको फोटो समाजिक सञ्जाल इन्सटाग्राममा सेयर गछिन्, जसलाई मनपराउने हजारौं रहेका छन । ३१ वर्षीया येओन वू झी नाम गरेकी यी महिलाको शरीर पुरुषलाई पनि मात दिने खालको छ । उनले बडी बिल्डिङमा कयौं उपाधि पनि जितेकी छिन् । […]
एउटा गल्ली जहाँ चुम्बनका लागि पर्खन्छन् सयौं जोडी
मेक्सिको सिटी –मेक्सिकोमा एउटा त्यस्तो ठाँउ छ । जहाँ जोडीहरु चुम्बनका लागि लाईनमा बस्छन् । उनीहरु पालो कुर्छन् र चुम्बन गर्छन् किनकी यहाँ चुम्बन गर्दा प्रेमि प्रेमिका दुबै १५ सालसम्म खुसी रहने विश्वास गरिन्छ । यसका पछाडी दुई प्रेम जोडीकोअधुरो कथा पनि छ । त्यस कथामा केटीलाई उनका बाबुले धारिलो हतियार प्रयोग गरेर मारेका थिए । [&hel..
ब्वासोलाई चुम्न नडराउने यी महिला
ब्वासोले तपाईको मुखमा ल्याएर आफ्नो मुख जोड्न खोज्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ ? अवश्य पनि तर्सनुहुन्छ होला । लामो समयदेखी जंगली जनावरको संरक्षणमा खटिएकी डेनाली भने तर्सन्नन् । उनले उल्टै ब्वासोलाई नजिक राखेर भिडियो खिचेकी छिन् । हेर्दै डरलाग्दो ८ वर्षको ठूलो ब्वासोले डेनालीसँग हिउँ खेलिरहेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छ ।..